ဖင်ဋီကာ - YomaLan
ဖင် အကြောင်း ပြောရင် ရိုင်းတယ်လို့ ထင်ကြတယ်။ တချို့က ဖင်လို့ ပြောရင် မကြိုက်ဘူး။ တင်ပါး လို့ ခေါ်စေ ချင်တာ။ မတူဘူး။ တင်ပါး ဆိုတာ အပေါ်က ပြောင်ပြောင် တင်းတင်း အပျို ပါးလေး လို ဖောင်းဖောင်း အိအိ ဖြစ်နေတဲ့ နေရာလေးပဲ ခေါ်တာ။ ဖင် ဆိုတာကျ အရိုးရော၊ အဆစ်ရော၊ အသားရော၊ တပြုံလုံး အကုန်လုံးကို ခေါ်တာ။ ဒါကြောင့် ဖင်လို့သာ ဆက်၍ ခေါ်မည် ခိုင်။
ဘာကိစ္စ ဖင်ကို ဗာရာဏသီ ချဲ့နေ သလဲ မေးစရာ ရှိတယ်။ ဖင်ဆိုတာ အရင် ကတော့ သိုသို သိပ်သိပ် ကွယ်ကွယ် ဝှက်ဝှက်ပဲ ကြည့်ရတဲ့ နေရာ။ အခုများ ဟုတ်ဘူးဗျ၊ ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ အောင်မြင်ရေး ကျင့်စဉ်ကြီး ဖြစ်နေတယ်။ . တခြား မကြည့်နဲ့။ လုလုအောင်ကို ကြည့်။ သူ့ဘာသာ ပုံလေး လှအောင် ဖင်နေရာ လေးကို ဖိုတို ချော့လေးနဲ့ ပြင်လိုက် ပါတယ်။ ဟမ်မာလေး သံတိုင် ကွေး ပါတယ် ဆိုပြီး မိန်းမတွေ ဝိုင်း ဖောင်းထု လို့ နာမည်ကြီး သွားတာ အခုဆို ပုရိသတွေ လုမှ လုနေ ကြပြီ။ ဟော စုလှိုင်ဝင်း ဆိုတဲ့ ကလေးမလေး၊ သူတတ်တဲ့ ပညာနဲ့ ကနေရင် ဘယ်သူမှ လူ မသိဘူး။ ဖင်လေး လှုပ်ပြီး လမ်းလျှောက် လိုက်မှ နာမည် ကြီးသွားတာ။ နောက် ခြူးစင်ဟန်တို့၊ ခင်ဆုရည်တို့လည်း ဖင်တိုက်ပွဲ ထဲ ဖင်စုံပစ် ဝင်လာကြ တော့တာ။
ဒါကြောင့် ဖင်ဆိုတာ အောင်မြင်ရေး လျှို့ဝှက်ချက်လို့ မှတ်ပါ ပရိတ်သတ်။
တနေ့သုံးခါ (တနေ့သုံးခါ) ဖင်ပြပါ (ဖင်ပြပါ) Flower တက်မည်မှတ် (ဖလူဝါ တက်မည်မှတ်)
သိပ် အရေးကြီး တယ်နော် ပရိတ်သတ်။ ဖင်နှစ်လုံးဟာ ကိုယ့်ဘ၀ တက်လမ်းကို ဖေါ်ဆောင် သွားနိုင် တယ်နော်၊ မှတ်ထားကြ။
အဲ၊ ပြောရင်း ကိုယ်တော်ကြီး စိတ်ဝင် သွားလို့ ပေါက်ကရတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီ။ တကယ်တော့ ဖင်ပြသူတွေ ကိုလည်း အဆိုး မဆိုပါနဲ့။ ဓမ္မပဒ ထဲမှာ ပါတယ် မဟုတ်လား။ အစွယ် ရှိသူသည် အစွယ်ကို အားကိုး၏။ ဦးချို ရှိသူသည် ဦးချိုကို အားကိုး၏ ဆိုတာလေ။ ဒီတော့ ဖင်ရှိသူ ဟာလည်း ဖင်ကို အားကိုးပေ မပေါ့။
ဒါကြောင့် ဖင်ကို ပြပါ။ မရှက် မကြောက် ပြပါ။ အလုံး အထည် ပီသအောင် ပြပါ။ အဖောင်း အကား ပီသအောင် ပြပါလို့ တိုက်တွန်း ပါရစေ။
ဖင် အားပေးသူ ယွကျား တွေကိုလည်း ကြည့်။ ယွကျား သစ္စာ၊ ဖင်အပေါ်မှာ တည့်တဲ့။ ယောက်ျား တွေဟာ ဘာကို သစ္စာ ရှိသလဲ ဆိုရင် ဖင်ကိုပဲ သစ္စာရှိကြ ပါပေတယ်။ ဘယ်သူ က ကလေး အမေ၊ ဘယ်သူက အပျို ဆိုတာ မစဉ်းစား၊ ဘယ်သူက ရှမ်း၊ ဘယ်သူက ဗမာ ဆိုတာ မစဉ်းစား။ ဘယ်သူ ဖင်ကြီး သလဲ၊ ဖင်သူ ဖင်လှ သလဲ၊ ဘယ်သူ ဖင်ရှုံ့ သလဲသာ စဉ်းစား ကြပါတယ်။ အင်မတန် ဖင်သစ္စာ ကြီးသော ယောက်ျား တွေပါ။ . အခု သင်ဇာလေး ဖင်ရှုံ့ကြည့်၊ အခု ဝန်းရံတာ ရပ်ပစ်လိုက်မှာ ပါပဲ။
ဒါကြောင့် ဖေ့စ်ဘုတ် အောင်မြင်ရေး၊ ဖင်တလုံးလုံး အသုံးချ ပေးလို့ ပြောပါရ စေတော့
😁😁😁 Credit _ Original Uploader
ဖငျ အကွောငျး ပွောရငျ ရိုငျးတယျလို့ ထငျကွတယျ။ တခြို့က ဖငျလို့ ပွောရငျ မကွိုကျဘူး။ တငျပါး လို့ ချေါစေ ခငျြတာ။ မတူဘူး။ တငျပါး ဆိုတာ အပျေါက ပွောငျပွောငျ တငျးတငျး အပြို ပါးလေး လို ဖောငျးဖောငျး အိအိ ဖွဈနတေဲ့ နရောလေးပဲ ချေါတာ။ ဖငျ ဆိုတာကြ အရိုးရော၊ အဆဈရော၊ အသားရော၊ တပွုံလုံး အကုနျလုံးကို ချေါတာ။ ဒါကွောငျ့ ဖငျလို့သာ ဆကျ၍ ချေါမညျ ခိုငျ။
ဘာကိစ်စ ဖငျကို ဗာရာဏသီ ခြဲ့နေ သလဲ မေးစရာ ရှိတယျ။ ဖငျဆိုတာ အရငျ ကတော့ သိုသို သိပျသိပျ ကှယျကှယျ ဝှကျဝှကျပဲ ကွညျ့ရတဲ့ နရော။ အခုမြား ဟုတျဘူးဗြ၊ ဖစျေ့ဘုတျမှာ အောငျမွငျရေး ကငျြ့စဉျကွီး ဖွဈနတေယျ။ . တခွား မကွညျ့နဲ့။ လုလုအောငျကို ကွညျ့။ သူ့ဘာသာ ပုံလေး လှအောငျ ဖငျနရော လေးကို ဖိုတို ခြော့လေးနဲ့ ပွငျလိုကျ ပါတယျ။ ဟမျမာလေး သံတိုငျ ကှေး ပါတယျ ဆိုပွီး မိနျးမတှေ ဝိုငျး ဖောငျးထု လို့ နာမညျကွီး သှားတာ အခုဆို ပုရိသတှေ လုမှ လုနေ ကွပွီ။ ဟော စုလှိုငျဝငျး ဆိုတဲ့ ကလေးမလေး၊ သူတတျတဲ့ ပညာနဲ့ ကနရေငျ ဘယျသူမှ လူ မသိဘူး။ ဖငျလေး လှုပျပွီး လမျးလြှောကျ လိုကျမှ နာမညျ ကွီးသှားတာ။ နောကျ ခွူးစငျဟနျတို့၊ ခငျဆုရညျတို့လညျး ဖငျတိုကျပှဲ ထဲ ဖငျစုံပဈ ဝငျလာကွ တော့တာ။
ဒါကွောငျ့ ဖငျဆိုတာ အောငျမွငျရေး လြှို့ဝှကျခကျြလို့ မှတျပါ ပရိတျသတျ။
တနသေုံ့းခါ (တနသေုံ့းခါ) ဖငျပွပါ (ဖငျပွပါ) Flower တကျမညျမှတျ (ဖလူဝါ တကျမညျမှတျ)
သိပျ အရေးကွီး တယျနျော ပရိတျသတျ။ ဖငျနှဈလုံးဟာ ကိုယျ့ဘဝ တကျလမျးကို ဖျေါဆောငျ သှားနိုငျ တယျနျော၊ မှတျထားကွ။
အဲ၊ ပွောရငျး ကိုယျတျောကွီး စိတျဝငျ သှားလို့ ပေါကျကရတှေ ဖွဈကုနျပွီ။ တကယျတော့ ဖငျပွသူတှေ ကိုလညျး အဆိုး မဆိုပါနဲ့။ ဓမ်မပဒ ထဲမှာ ပါတယျ မဟုတျလား။ အစှယျ ရှိသူသညျ အစှယျကို အားကိုး၏။ ဦးခြို ရှိသူသညျ ဦးခြိုကို အားကိုး၏ ဆိုတာလေ။ ဒီတော့ ဖငျရှိသူ ဟာလညျး ဖငျကို အားကိုးပေ မပေါ့။
ဒါကွောငျ့ ဖငျကို ပွပါ။ မရှကျ မကွောကျ ပွပါ။ အလုံး အထညျ ပီသအောငျ ပွပါ။ အဖောငျး အကား ပီသအောငျ ပွပါလို့ တိုကျတှနျး ပါရစေ။
ဖငျ အားပေးသူ ယှကြား တှကေိုလညျး ကွညျ့။ ယှကြား သစ်စာ၊ ဖငျအပျေါမှာ တညျ့တဲ့။ ယောကျြား တှဟော ဘာကို သစ်စာ ရှိသလဲ ဆိုရငျ ဖငျကိုပဲ သစ်စာရှိကွ ပါပတေယျ။ ဘယျသူ က ကလေး အမေ၊ ဘယျသူက အပြို ဆိုတာ မစဉျးစား၊ ဘယျသူက ရှမျး၊ ဘယျသူက ဗမာ ဆိုတာ မစဉျးစား။ ဘယျသူ ဖငျကွီး သလဲ၊ ဖငျသူ ဖငျလှ သလဲ၊ ဘယျသူ ဖငျရှုံ့ သလဲသာ စဉျးစား ကွပါတယျ။ အငျမတနျ ဖငျသစ်စာ ကွီးသော ယောကျြား တှပေါ။ . အခု သငျဇာလေး ဖငျရှုံ့ကွညျ့၊ အခု ဝနျးရံတာ ရပျပဈလိုကျမှာ ပါပဲ။
ဒါကွောငျ့ ဖစျေ့ဘုတျ အောငျမွငျရေး၊ ဖငျတလုံးလုံး အသုံးခြ ပေးလို့ ပွောပါရ စတေော့